Gini mere anyi ji acho Agba Ochie?
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 31, 2020 Ọgọstụ 31, 2020
Na-etolite, anụrụ m mgbe niile ka Ndị Kraịst na-agụghachi ndị na-ekweghị ekwe otu mantra ahụ: "Kwere na a ga-azọpụta gị".
Anaghị m ekwenye n'echiche a, mana ọ dị mfe idozi otu mmiri a nke na anyị leghaara oké osimiri ọ dị anya anya: Akwụkwọ Nsọ. Ọ dị mfe ileghara Agba Ochie anya n'ihi na Abụ ationskwá na-akụda mmụọ, ọhụụ Daniel dị omimi ma dị mgbagwoju anya, Abụ Sọlọmọn na-eme ihere n'ezie.
Nke a bụ ihe mụ na gị na-echefu 99% nke oge a: Chineke họọrọ ihe dị na Akwụkwọ Nsọ. Yabụ, na Agba Ochie dị adị pụtara na Chineke ma ụma tinye ya ebe ahụ.
Obere obere mmadu m apughi ichota onwe ya dika usoro echiche Chineke.Ya mere, o puru iweputa ihe ano nke agba ochie na-eme ndi guru ya.
1. Na-echekwa ma na-eziga akụkọ banyere Chineke nke na-azọpụta ndị ya
Onye ọ bụla nke na-enyocha Agba Ochie pụrụ ịhụ na n’agbanyeghi na ọ bụ ndị Chineke họpụtara, ụmụ Israel emehiela ọtụtụ ihe. Enwere m mmasị na ya.
Iji maa atụ, n’agbanyeghi na ị hụla mgbe Chineke wedara ala Ijipt (Ọpụpụ 7: 14-11: 10), kewaa Osimiri Uhie (Ọpụpụ 14: 1-22) ma budata ndị ahụ na-akpagbu Oké Osimiri ahụ e kwuru n’elu. (Ọpụpụ 14: 23-31) ), Ndị Izrel tụrụ ụjọ n'oge Mosis n'oge Ugwu Saịnaị ma chee n'etiti onwe ha, sị, “Chineke a abụghị Onye dị adị n'ezie. Kama nke ahụ anyị ga-efe ehi na-enwu enwu ”(Ọpụpụ 32: 1-5).
Nke a abụghị nke mbụ ma ọ bụ nke ikpeazụ nke njehie Izrel, Chineke hụkwara na ndị dere Bible ahapụghị otu nke. Ma gịnị ka Chineke mere mgbe ụmụ Izrel mehiere ọzọ? Zoputa ha. Ọ na-azọpụta ha oge ọ bụla.
Na-enweghị Agba Ochie, mụ na gị agaghị ama ọkara nke ihe Chineke mere iji zọpụta ụmụ Israel - nna nna anyị nke mmụọ - site na onwe ha.
Ọzọkwa, anyị agaghị aghọta isi mmalite nke usoro mmụta okpukpe ma ọ bụ ọdịbendị sitere na Agba Ọhụrụ n'ozuzu ya na Oziọma ahụ. Oleekwa ebe anyị ga-anọ ma ọ bụrụ na anyị amaghị oziọma?
2. Gosi na Chukwu etinyela ego na akụnụba anyị
Tupu ndị Izrel abịa n'Ala Nkwa ahụ, ha enweghị onyeisi, praịm minista, ma ọ bụ ọbụna eze. Israel nwere ihe anyi choro ohuru anyi gha akpo ọchịchị Chineke. Na ọchịchị Chineke, okpukpe bụ steeti na steeti bụrụ okpukpe.
Nke a putara na iwu ndi oputara n’Ọpụpụ, Levitikọs na Diuterọnọmi abụghị naanị “gị onwe gị” na “ị bụghị” maka ndụ onwe; bụ iwu ọha, n'otu aka ahụ, ịkwụ ụtụ isi na ịkwụsị akara ngosi bụ iwu.
"Caresnye chọrọ ịma?" Ask na-ajụ, "Levitikọs ka na-agwụ ike."
Nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu, mana eziokwu ahụ bụ na Iwu Chineke bụkwa iwu ala ahụ na-egosi anyị otu ihe dị mkpa: Chineke achọghị ịhụ ụmụ Izrel naanị na ngwụsị izu na Ememe Ngabiga. Ọ chọrọ ịbụ akụkụ dị mkpa nke ndụ ha ka ha wee nwee ọganihu.
Nke a bụ eziokwu banyere Chineke taa: Ọ chọrọ ịnọnyere anyị mgbe anyị na-eri Cheerios anyị, na-akwụ ụgwọ ego eletrik, ma na-ehicha akwa ahụ nke fọdụrụ n'ime draịva izu niile. Ewezuga Agba Ochie, anyi agaghi amata na odighi nkowa pere mpe nke Chukwu anyi.
3. Ọ na-akụziri anyị etu esi eto Chukwu
Mgbe ọtụtụ ndị Kraịst na-eche otuto, ha na-eche banyere ịbụ abụ na mkpuchi Hillsong na ụka. Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na akwụkwọ Abụ Ọma bụ akụkọ ọdịnala nke ukwe na uri na obere n'ihi na ịbụ abụ na-atọ ụtọ na Sọnde na-eme ka obi anyị dị ọkụ ma nwee mgbagwoju anya.
Ebe ọ bụ na ọtụtụ ofufe Ndị Kraịst nke oge a na-esite n'ihe na-enye obi ụtọ, ndị kwere ekwe na-echefu na ọ bụghị otuto niile na-esite n'ebe ọ joyụ. Jobhụnanya Job nwere n’ebe Chineke nọ funahụrụ ya ihe niile, ụfọdụ abụ ọma (dịka 28, 38 na 88) na-arịọsi arịrịọ ike maka enyemaka, Eklisiastis bụkwa onye na-achọsi ike etu ndụ enweghị isi.
Job, Abụ Ọma, na Eklisiastis dị iche na ibe ha, mana ha nwere otu nzube: ịnakwere Chineke dị ka onye nzọpụta ọ bụghị n'agbanyeghị nsogbu na nhụjuanya, mana n'ihi ya.
Ewezuga ihe odide Agba Ochie nke na-enweghị obi ụtọ, anyị agaghị ama na mgbu nwere ike ma kwesịkwa ijikwa maka otuto. Anyị ga-enwe ike ito Chineke naanị mgbe anyị nwere obi ụtọ.
4. buru amụma banyere ọbịbịa Kraịst
Chineke na-azoputa Israel, na -eme onwe ya akụkụ nke ndụ anyị, na-akuziri anyị otu anyị ga-esi eto ya… kedụ isi ihe niile a? Kedu ihe kpatara anyị ji achọ ngwakọta nke eziokwu, iwu na abụ uri na-enye nsogbu mgbe anyị nwere okwukwe "eziokwu ma a ga-azọpụta gị"?
N'ihi na Agba Ochie nwere ihe ọzọ ọ ga-eme: Amụma banyere Jizọs.Aịzaya 7:14 na-agwa anyị na a ga-akpọ Jizọs Immanuel, ma ọ bụ chi soro anyị. Hosea onye amụma lụrụ nwanyị akwụna dị ka ihe atụ nke ịhụnanya Jizọs nwere n’ebe Churchka na-ekwesịghị ekwesị nọ. Na Daniel 7: 13-14 buru amụma banyere ọbịbịa nke abụọ nke Jizọs.
Amụma ndị a na ọtụtụ ndị ọzọ nyere ndị agba ochie agba ochie ihe ha nwere olile anya: njedebe nke ọgbụgba ndụ nke iwu na mmalite nke ọgbụgba ndụ amara. Ndị Kraịst taa na - enwetakwa ihe site na ya: mmata na Chineke ejirila ọtụtụ puku afọ - ee, ọtụtụ puku afọ - ilekọta ezinụlọ ya.
N'ihi na ọ dị mkpa?
Ọ bụrụ n’ichefue ihe niile fọrọnụ, cheta nke a: Agba Ọhụrụ na-agwa anyị ihe kpatara olile anya anyị, mana Agba Ochie na-agwa anyị ihe Chukwu mere iji nye anyị olile-anya ahụ.
Ka anyị na-agụkwu ya, anyị na-aghọtakwu ma na-enwe ekele maka ogologo oge ọ rụpụtara maka ndị mmehie, ndị isi ike, na ndị nzuzu dị ka anyị na-erughị eru.
Nke gara aga Post Gara aga post:ndụmọdụ nke taa 31 Ọgọst 2020 nke John Paul II
Next Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa na eziokwu nke ihe ọjọọ na eziokwu nke ọnwụnwa